Tech Archives - JOY Mobile
Mobile Phone Accessories & Gadget Store
Facebook ကို VPN ဖြင့် အသုံးပြုနေတဲ့သူများအတွက်
အားလုံပဲမင်္ဂလာပါ။ယခု Post က VPN App တွေနဲ့ ဘယ် App က ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြောပြဖို့မဟုတ်ပဲ၊အခုချိန် VPN နဲ့ Facebook သုံးနေတဲ့သူများအတွက်သိထားသင့်တဲ့အချက်လေး ပြောပြချင်လို့ပါ။- ပထမအချက်ကတော့VPN တွေသုံးတဲ့အချိန် App မှာပါတဲ့ Server Location ကို"Best Performance" တို့၊ "Best Server", "Auto" တို့ထားခြင်းကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။ထိုသို့ထားထားပါက VPN App မှ မိမိအင်တာနက်လိုင်းနှင့် အဆင်အပြေဆုံး Server ကို ရှာပေးမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်းVPN တစ်ခါသုံးတိုင်း Server Location တွေက အမြဲတမ်းမတူနိုင်ပါ။( ဥပမာ။ ။ ပထမတစ်ခါဖွင့်တုန်းက US ဖြစ်နေပေမယ့်၊ နောက်တစ်ခါဖွင့်သုံးတဲ့အချိန် JAPAN ပြောင်းသွားတာမျိုးပါ။ )အဲ့လို Location ခဏခဏပြောင်းသွားမိမယ်ဆိုရင်အခန့်မသင့်ရင် Facebook ကနေ မိမိအကောင့်ရဲ့ Login Location Activity ကြောင့် lock ကျသွားတာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် VPN တွေမှာ Server Location ကို ရွေးလို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင် location တစ်ခုပဲ အမြဲထားသုံးသင့်ပါတယ်။ပြီးတော့ VPN နဲ့ ကျော်သုံးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Facebook Account တွေ မလိုအပ်ပဲ Logout မလုပ်ဖို့ပါ။အခန့်မသင့်ရင် Logout လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ဖို့ ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။- နောက်တစ်ချက်ကတော့ အွန်လိုင်းရှောပင်းတွေအတွက်ပါ။အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေရော၊ Facebook Boost Service လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ယခုရက်ပိုင်း Boost…continue reading →
အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် မိမိတို့ရဲ့လစဉ်မီတာခများကို စစ်လို့ရပါပြီ။ အရင်ရက်က မီတာခကို Website ကနေ စစ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Website ကိုတကူးတကသွားရောက်ပြီး စစ်စရာမလိုတော့ပဲ Android ဖုန်းတွေကနေ အလွယ်တကူစစ်နိုင်မယ့် Application လေးကို ကျွန်တော်တို့ JOY Mobile ( မိုးကုတ် ) ကနေ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ အခု Application ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ မီတာခတောင်းခံလွှာစာရွက်မှာပါတဲ့ မီတာအမှတ် နှင့် ကွန်ပျူတာကုဒ် လေးထည့်ရုံဖြင့် နောက်ဆုံးလဆောင်ထားတဲ့ ကျသင့်ငွေ၊ သုံးစွဲထားသောမီတာယူနစ် တွေအပြင် ရှေ့ ၃လ/၄လ က အချက်အလက်များကိုပါ စစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေက မီတာတွေပဲစစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ( မိုးကုတ်မြို့က မီတာတွေလည်းစစ်လို့ရပါတယ်။ ) ယခု Applicaton ကိုသုံးပြီးစစ်ဖို့အတွက် မီတာစာရွက်က မီတာအမှတ်ကွန်ပျူတာကုဒ် နှစ်မျိုးလေးပဲလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီတာအမှတ် နှင့် ကွန်ပျူတာကုဒ် ကြည့်နည်းကိုလည်း တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Application ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမယ့် Link များကိုလည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ မိမိအဆင်ပြေမယ့် Link ကနေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ မိုးကုတ်မြို့ကဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ JOY Mobile Service ( အောင်ချမ်းသာ ) ဆိုင်မှာလည်း အခမဲ့ လာရောက်သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Application Download Download Application ( Mediafire ) Download Application…continue reading →
Honor က Magic Earbuds အသစ်ကိုမိတ်ဆက်
/Under	News, Tech
၂၀၁၉ ကစလို့ ယခု ၂၀၂၀ အထိ စျေးကွက်ထဲမှာ TWS Earphone တွေကို တော်တော်များများတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလဲ Huawei ရဲ့ Brand ခွဲဖြစ်တဲ့ Honor ကနေ TWS Earphone အသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Honor ကတော့ Magic Earbuds လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ သူ့မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ Feature အနေနဲ့ Hybrid Noise Cancelling စနစ်ပါဝင်လာပါတယ်။ Honor ကပြောထားချက်အရ နားကြပ်မှာ Mic သုံးခုပါဝင်ပြီး in-call Noise Cancelling စနစ်ပါဝင်ကာ ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အသံကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ်လို့ ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အတိအကျတော့ နောက်မှသေချာထပ်တင်ပေးပါမယ်။ နားကြပ်တစ်ဖက်စီမှာ Battery 37mAh ပါဝင်ပြီး ၃နာရီခွဲ သီချင်းနားထောင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ နားကြပ်အားကုန်သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်အားသွင်းဖို့ Battery Case မှာ Battery 410mAh ပါဝင်ပြီး Type-C ပေါက်နဲ့ ၁နာရီခွဲအတွင်း အားပြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပါဝင်နေကျ features တွေဖြစ်တဲ့ သီချင်းရပ်တာ ဖွင့်တာ ဖုန်းကိုင်တာတွေပါဝင်ပြီး EMUI 10 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ instant pairing တို့နဲ့ တခြား features တွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Honor Magic Earbuds ရဲ့စျေးနှုန်းကတော့ မြန်မာငွေ ၂သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်မဝင်ဆိုတာကတော့ ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတာနဲ့ သိရမှာပါ။ ref: gizchina.comcontinue reading →
iPhone တွေရဲ့ Region ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲ?
/Under	Knowledge, Tech
သင်ဟာ iPhone အသုံးပြုသူဆိုရင်တော့ အခုအချက်လေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ် iPhone အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းက ဘယ်နိုင်ငံ ( Region ) ကလဲဆို သိချင်နေမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် iPhone တစ်လုံးရဲ့ Region ကို ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာလေးကို Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ iPhone Second ရောင်းတဲ့Post တွေမှာ အခုလိုမျိုးရေးထားတာတွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အခုဖုန်းကတော့ ZP/A ပါ၊ LL/A ပါ စသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ဒီ ZP/A တို့ LL/A တို့ထဲက ZP, LL တွေဆိုတာ Region Code တွေပါပဲ။ Region Code တွေကို Phone Model နံပါတ်တွေနဲ့အတူ တွဲတွေ့ရပါတယ်။ Phone Model ကို Setting > General > About ထဲက Model Number ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Phone Model မှာပါတဲ့စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှေ့ကနေရေတွက်လို့ ၆ လုံးမြောက်ဟာ Region Code ပါ။ Region code ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ချို့က ၆ လုံးနဲ့ ၇ လုံးမြောက် နှစ်လုံးတွဲလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ ။ MG4J2ZP/A ဆိုရင် ZP က Region…continue reading →
iPhone တွေမှာ Battery Health ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲ?
/With	13,638 Comments
မိုးကုတ်က iPhone အသုံးပြုနေတဲ့သူများအတွက် မိမိတို့ရဲ့ဖုန်း Battery ကောင်း/မကောင်း ဘယ်လိုစစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ iPhone တွေမှာ Battery မကောင်းရင် အားလည်းမခံတော့တဲ့အပြင်၊ ဖုန်းသုံးနေရင်းနဲ့လည်း ပါဝါပိတ်သွားတာမျိုးတွေပါ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ iPhone မှာ အခြားဖုန်းတွေထက် လန်းတဲ့အချက်ကတော့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Battery ရဲ့ Health အခြေအနေကို လွယ်လွယ်ကူကူစစ်ကြည့်လို့ရနိုင်တာပါပဲ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ iphone တွေမှာ Battery Health နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် Setting ထဲကိုဝင်ပါ။Battery ထဲကို ထပ်ဝင်ပါ။Battery ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် Battery health ဆိုတဲ့အထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ယခု Post က ပုံထဲကလိုမျိုး Maximum Capacity မှာ ပေါ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Battery ကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။ ( ပုံထဲက မင်မင်ရဲ့ဖုန်းဆိုရင် 86% ဖြစ်နေပြီမို့ အသစ်လဲသင့်နေပါပြီ :D ) Maximum Capacity မှာ 100% ဖြစ်နေရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။ 100% ကနေ 90% အတွင်းမှာရှိနေရင် စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါသေးတယ် 87%အောက်လောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ အားကုန်မြန်တာ၊ တစ်ခါတစ်လေ သုံးနေရင်း ဖုန်းပါဝါပိတ်သွားတာတွေကို ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ 80% အောက်ထက်နည်းသွားရင်တော့ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ Service ဆိုပြီးတော့ကို ပေါ်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် အမြန်ဆုံး battery အသစ်လဲတာအကောင်းဆုံပါပဲ။ အသစ်လဲတဲ့အချိန်မှာလည်း လဲတဲ့ Battery အောင်/မအောင်ကို ခုဏက Maximum…continue reading →
MPT Fiber 20Mb ယူထားတဲ့သူတွေ 25Mb သို့တိုးမြင့်ရရှိ
မြန်မာငွေ ၆သိန်းဝန်းကျင်တန် iPhone SE 2020
MI 10 Pro 5G နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံအကြမ်းကြီး
Anycast M4 Plus Ks14,000
Aukey CB-CL1 Ks29,000
USB WiFi Stick Ks8,000
Xiaomi WiFi Repeater Pro Ks17,000
မြတ်စေတနာ လူမှုကူညီရေးရုံး မျက်စောင်းထိုး၊ မြနဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေး ရွှေဖြူခေါက်ဆွဲဆိုင်ရှေ့ မိုးကုတ်မြို့
Phone : 09256015535
ရှမ်းတောကျောက်တိုင်ကွင်း နွေစံအိမ်ကဖေးလမ်းချိုး အောင်ချမ်းသာရပ် မိုးကုတ်မြို့
Phone : 09402514250
— Facebook Group
— Viber No : 09256015535